Nidaamka Bentley wuxuu ku dhawaaqayaa helitaanka SPIDA - Geofumadas
Juunyo, 2021 Geospatial - GIS, Engineering, tabo cusub
La Wareegidda Software-ka SPIDA
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), oo ah shirkadda softiweerka kaabayaasha injineernimada, ayaa maanta ku dhawaaqday helitaanka SPIDA Software, soosaarayaasha softiweer takhasus u leh naqshadeynta, falanqaynta iyo maaraynta nidaamyada tiirarka korontada. Waxaa la aasaasay 2007 magaalada Columbus, Ohio, SPIDA waxay siisaa xalal, tusaalayaal iyo xalal maareynta xogta softiweer barnaamijyada shirkadaha korontada iyo isgaarsiinta iyo shirkadaha bixiya adeega injineernimada ee Mareykanka iyo Kanada. Isku-darka SPIDA ee ku jira barnaamijka injineernimada Bentley ee OpenUtilities iyo adeegga daruuriga mataanaha ee shabakadda ayaa gacan ka geysan doona wax ka qabashada caqabadaha u gudubka ilaha tamarta la cusbooneysiin karo, oo ay ku jiraan ku-dallaca gawaarida korontada ku shaqeeya, adeegsiga qalabka wadajirka ah ee wadajirka ah si loo taageero ballaarinta 5G ee shabakadaha ballaadhinta iyo casriyeynta, iyo adkaanta ee shabakadda korontada si loo ilaaliyo kalsoonida iyo adkeysiga.
Mataanaha dijitaalka ah ee loo yaqaan 'Grid mataanaha' ayaa ku bixin kara yutiilitiyada matoorro isdaba-joog ah oo si toos ah loo farsameeyay matalaadkooda gudbinta iyo qaybinta, isku-darka shabakadaha casriga ah iyo falanqaynta qaab-dhismeedka leh 3D iyo 4D xaqiiqda jir ahaaneed sida ay u shaqeyso. Bentley's OpenUtilities shabakadaha dhijitaalka ah ee mataanaha ah ayaa awood u siinaya hawl wadeenada iyo waxsoosaarayaasha inay qiimeeyaan jaangooyooyinka iyo fursadaha shabakadda, oo hadda ku faaneysa ilo dhaqameed, cusbooneysiin iyo kaydinta tamarta. Maaddaama ay bixiyaan adeegyo si loo daboolo baahida. Mataanaha dhijitaalka ah waxay sare uqaadaan maareynta caafimaadka hantida iyagoo isku badalaya IT, OT, iyo ET (qaabeynta injineernimada iyo tusaalayaasha) si looga faa'iideysto ilaha xogta kaabayaasha IoT iyo falanqaynta saadaasha ah si loo hagaajiyo amniga, waxqabadka, iyo kalsoonida. Marka lagu daro SPIDA, gaadhista mataanaha shabakada ayaa hadda lagu kordhin karaa dhismayaasha tiirarka korontada iyo shabakadaha, iyadoo la siinayo jawiga u nugul deegaanka “maylkii ugu dambeeyay” ee kaabayaasha muhiimka u ah tamarta iyo isgaarsiinta muhiimka ah.
Hoggaaminta adeegyada korantada, oo ay ku jiraan Ameren, EPCOR, Nashville Electric Service (NES), iyo Southern California Edison (SCE), waxay qaabeeyaan waxtarka iyo adkeysiga nidaamyadooda sare iyagoo adeegsanaya barnaamijka SPIDA. Xalalka tiirarka korantada ee 'SPIDA' waxaa ka mid ah SPIDAcalc si loo soo qabto, loo tusaaleeyo loona hagaajiyo gudbinta dusha iyo hantida qaybinta xamuulka qaabdhismeedka SPIDAsilk si ay u falanqeeyaan xariijinta foorarka iyo naqshadeynta xiisadaha ee guryaha jirka iyo deegaanka si loogu rakibo kaariyuhu saxda ah iyo xiisadda fiilada; iyo SPIDAstudio, oo ah barxad daruur ku saleysan oo bartamaha ula socota oo maamusha xaaladda hantida iyo xaaladda jireed ee nidaamyada hawada.
Maaddaama ballaarinta degdegga ah ee ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay sii socoto oo ay jirto baahi koror ah oo loo qabo isticmaalka gawaarida korontada, kaabayaasha shabakadeena ayaa si xad dhaaf ah culeys badani u saaran yahay, iyo keenista 5G-karti ballaadhan leh, tiirarka korantada ee dhagaystayaasha Shabakaddu waa kuwo aan qiimo ku lahayn kaabayaasha dhaqaale ee waara, ”Ayuu yiri Alan Kiraly, madaxweyne ku xigeenka sare, shabakad iyo waxqabadka hantida, Bentley Systems.
La wareegidda Barnaamijka 'SPIDA Software', in kasta oo aysan muhiim u ahayn natiijooyinka maaliyadeed ee Bentley, waxay ku dari doontaa 26 jaaliyadood oo Waqooyiga Ameerika ah. 7 La taliyayaasha Mile waxay kula taliyeen maamulka SPIDA iyo saamileyda macaamilka.
Aragtidayada SPIDA had iyo jeer waxay ahayd inaan siino xal dhameystiran oo furan si loo ilaaliyo loona hagaajiyo caafimaadka iyo sharafta adeegsiga tamarta iyo hantida kaabayaasha isgaarsiinta. Kooxda Bentley gudaheeda, waxaan rajeyneynaa inaan dardar galino xalalka Grid Digital Twin, oo ka faa'iideysanaya qibradeena dhinaca warshadaha isla markaana ku daraya falanqaynta qaabdhismeedka SPIDA. Isticmaalayaasha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka ee 'SPIDA' waxay si kalsooni leh u rajeyn karaan inay ka faa'iideystaan ​​mataanaha shabakadda markay kor u qaadayaan, wax ka beddelayaan, ballaarinayaan, ayna maareeyaan nidaamyadooda hawada. Brett Willitt, Madaxweynaha Barnaamijka SPIDA
Waxa loola jeedaa?
Thanks to helitaankan cusub ee Bentley Systems si loo hagaajiyo waxqabadka iyo iska caabinta shabakadeeda, waxay ku habboon tahay adeegyada daruuriga ah ee (DT) mataanaha dijitaalka ah -Open Utilities- ee shirkaddan tiknoolajiyadeed ay soo bandhigtay. Isku-darka fikradaha iyo nidaaminta geeddi-socodka ayaa u oggolaanaya wax ka qabashada caqabadaha cusub ee la xiriira tamarta nadiifka / cusboonaysiinta, iyo sidoo kale hagaajinta falanqaynta qaab-dhismeedka qalabka ee la xiriira adeegyada dadweynaha.
Bentley wuxuu si isdaba joog ah ugu tiirsan yahay tikniyoolajiyadda horumarinta baaxadda leh ee joogtada ah. Muhiimadda horumarinta noocan ah ayaa ah in la helo kaabayaal ku habboon dejinta iyo isku xirnaanta adeegyada 5G iyo xoojinta shabakadaha korontada iyo adkeysigooda waqtiga. Go'aannada caqliga leh ee Bentley System ayaa ka muuqday kororka qiimaha saamiga tan iyo sanadkii hore. Tani waxay muujineysaa inay sii kori doonto oo ay si isdaba joog ah isu beddeli doonto, iyadoo la jaanqaadeysa xalalkeeda xaqiiqda kacaankan 4-aad ee warshadaha
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno asxaabteena cusub ee ka socota SPIDA ilaa Bentley Systems iyo OpenUtilities, waxaana rajeyneynaa inaan sii wadno isdhexgalka iyo caalamiyeynta barnaamijka SPIDA, oo horey loogu yaqiinay injineerada awood qeybsiga awooda aan shuruud laheyn shaqadooda muhiimka ah si loo hagaajiyo waxqabadka shabakada iyo adkeysiga. »Ian Kiraly, madaxweyne ku xigeenka sare, shabakad iyo waxqabadka hantida, Bentley Systems.
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) waa shirkadda softiweer injineernimada kaabayaasha. Waxaan bixinaa barnaamij casri ah oo lagu hormarinayo kaabayaasha adduunka, iyadoo la sii wadayo dhaqaalaha adduunka iyo deegaanka. Xalkeenna softiweerka ah ee xallinta barnaamijyada waxaa adeegsada xirfadlayaal iyo ururro nooc kasta leh oo loogu talagalay naqshadeynta, dhismaha iyo howlaha waddooyinka iyo buundooyinka, jidadka tareenka iyo marinka, biyaha iyo biyaha wasakhda ah, howlaha guud iyo adeegyada guud, dhismayaasha iyo xarumaha. Iyo xarumaha warshadaha. Waxyaabaha aan bixino waxaa ka mid ah codsiyada ku saleysan MicroStation ee ku saabsan moodeelka iyo jilitaanka, ProjectWise ee bixinta mashruuca, AssetWise ee shabakadda iyo waxqabadka hantida, iyo barnaamijka 'iTwin' ee kaabayaasha mataanaha ah ee kaabayaasha ah. Nidaamka Bentley wuxuu shaqaaleysiiyaa in ka badan 4000 oo asxaab ah wuxuuna soo saaraa dakhli sanadle ah oo ka badan $ 800 milyan 172 dal. Www.bentley.com
Post Previous" Hore GANACSIGA UAV EXPO AMERICAS
Post Next INFRAWEEK 2021 - diiwaangelintu way furan tahayNext »